Amụma Nzuzo | Otu Di na Nwunye
Anyị nwere ike ịnakọta ozi njirimara nke sitere n'aka ndị ọrụ n'ọtụtụ ụzọ, gụnyere, mana ọ bụghị nanị na, mgbe ndị ọrụ na-aga na saịtị anyị, denye aha na saịtị ahụ, debe iwu, jupụta ụdị, zaa ajụjụ nyocha, na na njikọ ihe ndị ọzọ, ọrụ, atụmatụ ma ọ bụ ihe onwunwe anyị na-eme ka anyị dị na saịtị anyị. A pụrụ ịjụ ndị ọrụ maka, dịka o kwesịrị ekwesị, aha, adreesị ozi-e, adreesị ozi-e, nọmba ekwentị. Otú ọ dị, ndị ọrụ nwere ike ịga na saịtị anyị n'enweghị aha. Anyị ga-anakọta ozi njirimara nke onwe site n'aka ndị ọrụ ma ọ bụrụ na ha na-enyefe anyị ozi dị otú ahụ. Ndị ọrụ nwere ike ịjụ ịzụta ozi njirimara n'onwe ha, ma ọ bụrụ na ọ nwere ike igbochi ha itinye ụfọdụ ọrụ metụtara saịtị.
Ebe Weebụ anyị nwere ike iji "kuki" mee ka ahụmịhe Onye ọrụ. Ihe nchọgharị weebụ onye ọrụ na-etinye kuki na draịvụ ike ha maka ihe ndekọ edekọ na mgbe ụfọdụ iji soro ozi gbasara ha. Onye ọrụ nwere ike ịhọrọ itinye ihe nchọgharị weebụ ha iji jụ kuki, ma ọ bụ iji mee ka ị mara mgbe a na-eziga kuki. Ọ bụrụ na ha emee, rịba ama na ụfọdụ akụkụ nke saịtị ahụ agaghị arụ ọrụ nke ọma.
Di na Nwunye di na uzo nwere ike ichikota ma jiri ndi oji ozi nkeonwe maka ihe ndi ozo:
Na-agba ọsọ na-arụ ọrụ anyị na saịtị
Anyị nwere ike ịdị mkpa gị ọmụma ngosi ọdịnaya na saịtị n'ụzọ ziri ezi.
Iji melite ọrụ ahịa
Iji hazie ahụmahụ onye ọrụ
Iji melite anyị n'Ịntanet
Iji hazie ịkwụ ụgwọ
Iji na-akwado nkwalite, asọmpi, nnyocha ma ọ bụ atụmatụ Njirimara ọzọ
Iji jikwaa nyocha na atụmatụ
Anyị nwere ike iji ndị na-eweta ọrụ ndị ọzọ nyere anyị aka ijikwa nyochaa ngwaahịa na ọkwa ndị ọrụ na-ahapụ.
Iji zipụ ozi ịntanetị oge
Anyị nwere ike iji adreesị ozi-e na-eziga ozi Onye ọrụ na mmelite gbasara usoro ha. Enwere ike iji ya mee ka ha zaa ajụjụ, ajụjụ, na / ma ọ bụ arịrịọ ndị ọzọ.
Anyị anaghị ere, ahia, ma ọ bụ gbazinye ndị ọzọ ozi njirimara nke onwe. Anyị nwere ike ịkekọrịta ozi gbasara ndị mmadụ na-ejikọtaghị na ozi njirimara nke onwe onye gbasara ndị ọbịa na ndị ọrụ na ndị ahịa anyị, ndị mmekọ kwadoro na ndị mgbasa ozi maka nzube ndị edepụtara n'elu. Anyị nwere ike iji ndị ọrụ ọrụ ndị ọzọ nyere anyị aka rụọ ọrụ anyị na saịtị ma ọ bụ nye ọrụ na nnọchite anyị, dị ka izipụ akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ nyocha. Anyị nwere ike ịkekọrịta ozi gị na ndị ọzọ ndị a maka nzube ndị ahụ dị oke mkpa na ị nyere anyị ikikere gị.
Akwụkwọ akụkọ kọmputa
Ọ bụrụ na Onye ọrụ kpebiri ịbanye na listi nzipu ozi anyị, ha ga-enweta ozi-e nwere ike ịgụnye ozi ụlọ ọrụ, mmelite, ngwaahịa ma ọ bụ ozi ọrụ, wdg. Ọ bụrụ na Onye ọ bụla chọrọ ịwepụ aha na ịnweta ozi ịntanetị n'ọdịnihu, anyị gụnyere nkọwa zuru ezu. wepu aha ntuziaka na ala nke email ọ bụla ma ọ bụ Onye ọrụ nwere ike ịkpọtụrụ anyị site n'Ịntanet anyị. Anyị nwere ike iji ndị ọrụ ọrụ ndị ọzọ nyere anyị aka rụọ ọrụ anyị na saịtị ma ọ bụ nye ọrụ na nnọchite anyị, dị ka izipụ akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ nyocha. Anyị nwere ike ịkekọrịta ozi gị na ndị ọzọ ndị a maka nzube ndị ahụ dị oke mkpa na ị nyere anyị ikikere gị.
Ndị ọrụ nwere ike ịchọta mgbasa ozi ma ọ bụ ọdịnaya ndị ọzọ na saịtị anyị na-ejikọta na saịtị na ọrụ nke ndị mmekọ anyị, ndị na-eweta ọrụ, ndị mgbasa ozi, ndị nkwado, ndị ikikere na ndị ọzọ. Anyị anaghị achịkwa ọdịnaya ma ọ bụ njikọ ndị gosipụtara na saịtị ndị a ma ọ bụghị maka ọrụ ndị weebụsaịtị jikọtara ma ọ bụ site na Webs anyị. Tụkwasị na nke a, saịtị ma ọ bụ ọrụ ndị a, gụnyere ọdịnaya na njikọ ha, nwere ike ịdị na-agbanwe mgbe niile. Saịtị na ọrụ ndị a nwere ike ịnwe ụkpụrụ nzuzo onwe ha na iwu ndị ahịa. Nchọgharị na mmekọrịta na weebụsaịtị ọ bụla ọzọ, gụnyere weebụsaịtị nke nwere njikọ na saịtị anyị, bụ isiokwu na usoro nke onwe weebụ.
Ụfọdụ mgbasa ozi nwere ike iji Google rụọ ọrụ. Iji Google kuki kuki DART enyere ya aka iji mgbasa ozi nye ndị ọrụ dabere na nleta ha na saịtị na saịtị ndị ọzọ na Ịntanetị. DART na-eji "ozi a na-anaghị amata n'onwe ya" ma ghara ịma ozi gbasara gị, dị ka aha gị, adreesị ozi-e, adreesị anụ ahụ, wdg. Ị nwere ike ịpụ na ojiji kuki DART site na ịga na mgbasa ozi Google na mgbasa ozi. iwu na http://www.google.com/privacy_ads.html
Di na Nwunye di na ya nwere ezi uche iji melite iwu nzuzo a n'oge obula. Mgbe anyị na-eme ya, anyị ga-ede ọkwa na ibe anyị na saịtị ma zigara gị email. Anyị na-akwado ndị ọrụ iji nyochaa nke a ugboro ugboro maka mgbanwe ọ bụla iji mara banyere otu anyị si enyere aka ichebe ozi nkeonwe anyị na-anakọta. Ị kwenyere na kwenye na ọ bụ ọrụ gị iji nyochaa iwu nzuzo a kwa oge ma ghọtakwuo mgbanwe.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla banyere nke a Amụma nzuzo, ka omume niile nke saịtị a, ma ọ bụ gị na-emekọ ihe na saịtị a, biko kpọtụrụ anyị.
Echere akwụkwọ a na July 16, 2017